Fotoana kely-diany sy dian'ny mpanjifa | Martech Zone
Fotoana kely amin'ny Micro sy ny dia an'ny mpanjifa
Alatsinainy, Aogositra 24, 2015 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Ny indostrian'ny varotra an-tserasera dia manohy mandroso amin'ny fanomezana ny haitao izay ahafahan'ny mpivarotra maminany sy manome sori-dalana hanampiana ny mpanjifa sy ny orinasa hiova. Na izany aza, dia efa nieritreritra zavatra vitsivitsy foana izahay. Ny lohahevitry ny funnels personas sy ny varotra dia be poria sy malefaka kokoa noho ny noeritreretinay hatrizay.
Nanome fikarohana i Cisco fa ny salan'isa vokatra novidina dia manana dia an-jatony 800 an'ny mpanjifa mitarika azy io. Eritrereto ny momba ny fanapahan-kevitry ny fividianana anao sy ny fomba fanaovanao ny fikarohana, ny Internet, ny fivarotana, ny mailaka, ny fikarohana ary ny paikady hafa rehefa manohy ny lalan'ny fanapahan-kevitra ianao. Tsy mahagaga raha maninona ny matihanina amin'ny varotra sy ny varotra dia mitolona amin'ny fanamelohana be tokoa. Antony iray hafa koa mahatonga izany marketing omni-channel mila alamina tsara mba hanatsarana ny vokatra.
Raha afaka maminavina sy manome marketing mialoha ny dian'ny mpanjifa ianao dia azonao atao ny mampihena ny disadisa ary mitarika azy ireo hividy amin'ny fomba mahomby kokoa. Raha ny marina, ny fikarohana avy amin'ny Cisco dia mampiseho fa ireo mpivarotra amperinasa manolotra Internet amin'ny zava-drehetra traikefa afaka misambotra fanatsarana tombony 15.6 isan-jato.
Atambaro miaraka ireo Mieritrereta amin'ireo fotoana fohy ananan'i Google Fikarohana ary sisa tavela amin'ny fotoana bitika kely 4 tokony hodinihin'ny mpivarotra rehetra isika:
Te hahalala fotoana aho - 65% amin'ireo mpanjifa an-tserasera no mitady fampahalalana bebe kokoa an-tserasera noho ny taona vitsivitsy lasa izay. 66% amin'ireo mpampiasa finday avo lenta no mijery zavatra hitany tamin'ny dokambarotra fahitalavitra.
Te handeha fotoana vitsivitsy aho - Fisondrotana 200% amin'ny fikarohana "akaiky ahy" ary 82% amin'ireo mpampiasa finday avo lenta no mampiasa motera fikarohana hitadiavana orinasa eo an-toerana.
Te-hanao fotoana aho - 91% amin'ireo mpampiasa finday avo lenta no mitady hevitra amin'ny findainy raha manao asa iray ary maherin'ny 100 tapitrisa ora ny atiny nojerena ao amin'ny Youtube hatreto. ity taona ity.
Te hividy fotoana aho - 82% amin'ireo mpampiasa finday avo lenta no mijery ny findainy mandritra ny fivarotana manapa-kevitra izay hovidiana. Nahatonga fiakarana 29% ny tahan'ny fanovana finday tamin'ny taona lasa.
Na dia mifantoka amin'ny mpampiasa finday aza i Google, dia tsy maintsy fantatrao ny fiantraikan'izany amin'ny làlan'ny mpanjifa rehetra - manomboka amin'ny fahazoana azy hatramin'ny fivarotana vaovao na amin'ny fanavaozana fotsiny. Ny tena izy dia tokony hihatsara kokoa amin'ny famolavolana atiny izay mandrisika ny fotoana fanapahan-kevitry ny fividianana isika. Ampio ny an'ny olona fomba fianarana ary singa manosika ny fividianana ary tsy mahagaga raha maninona ireo mpivarotra no sahirana amin'ny famokarana atiny izay mitarika ny fiovam-po. Ny Analytics dia tsy manome fahitana momba ireo ary izany no antony mahatonga ny mpivarotra atiny hitady fahalalana bebe kokoa vahaolana haminavina sy handrefesana ny zava-bitan'ny atiny.
Tags: AttributionCiscoContent Marketingfiovam-ponyMpanjanantanyTe-hividy ahoTe-hanao ahoTe-handeha ahotiako ho fantatramicro-fotoanamicromomentsmieritreritra amin'ny Google